Ogaden News Agency (ONA) – Waa kuma Dr Mulatu Teshome, Madaxweynaha cusub ee Itobiya? Maxaase looga doortaa qawmiyad kali ah ..
Waa kuma Dr Mulatu Teshome, Madaxweynaha cusub ee Itobiya? Maxaase looga doortaa qawmiyad kali ah ..
Waxaa shalay oo bisha Oktoobar ahayd 7, 2013 uu ku dhawaaqay baarlamaan ku sheega Itobiya inay u doorteen M/weyne cusub ninka xisbiga kali ah EPRDF ee dalkaa xukuma uu soo magacaabay. Dr. Mulatu waa nin siday yidhaahdeen ka soo jeeda Oromo, kuna dhashay magaalada Arjo ee gobolka Welega ayuuna ku dhashay 1956. Dalka Shinaha ayuu wax ku soo bartay oo shahaadada Doctorate-ka Qaanuunka Dawliga uu ka soo qaatay. Wuxuu ka tirsan yahay Guddiga Fulinta ee xisbiga OPDO oo ah garabka Oromada ee EPRDF. Jagooyin kala duwan ayuu soo qabtay ay ka mid yihiin wasiirka beeraha iyo safiirnimo dalalka Shiinaha iyo Jaban iyo Turkiiga.
Shabakadda ER oo warkan qortay (Akhri) ayaa tidhi; Magaca Mulatu Teshomo ma’aha magaca Oromo ee waa magaca Abisiini (Abyssinian name) sidaa darteed ayay yidhaahdeen qaar badan ayaa aaminsan inuusan ahayn Oromo ee dhulka buuralayda uu ka soo jeedo. Waxay intaa raacisay shabakadda Ethiopian Review in Madaxweyanayaasha Itobiya lagu sheego inay yihiin Oromo, hasa ahaatee isaga iyo ninka uu jagada ka badalayo Mr. Girma Wolde-Giorgis aanay labadaba ahayne Oromo. Waxayse ku dhasheen gobolada Oromo, afka Oromadana way ku hadlaan, waxayse ka soo jeedaan Amxaaro sidii Mingistu Xayle Maryam.
Siyaasiyiinta Oromada ayaa siyaaba kala duwan uga hadlay arintan, iyagoo u arkay inay tahay un jaga aan jirin oo qawmiyadda Oromada lagu sasabo, sababtoo ah bay dheheen waa jago ninka ku magacaaban uusan lahayn wax awood ah sida uu qorayo dastuurka uu ururka TPLF u dajiyay dalka Itobiya. Shabakadda opride.com oo aqoonyahanka Oromada ay wax ku qoraan ayaa yidhi u doorashada Oromada madaxweynaha Itobiya inta aadan meel kale ka fiirin dib ugu noqo dastuurka Itobiya saad u aragto awooda iyo hawlaha uu qabto M/weynaha Itobiya ee ku cad qodobka 71 ee dastuurka la qoray 1994kii. Maqaal xiisa leh ayay ka qoreen doorashadan ay cinwaan uga dhigeen -Madaxweyninimada Itobiya iyo Baahida in aan wadaagno sharaf dhaca- ( Ethiopian presidency and the need to share our humiliation).
Su’aalaha ay soo dhex dhigeen akhristaha ayaa waxaa ka mid ahaa; Maxay tahay sababta Madaxweynaha Itobiya looga doorto hal gobol ama hal qawmiyad oo ah Oromada la Amxaareeyay? Sababtase maxay tahay M/weynayaasha Oromada looga dhigay qaar aan awood lahayn siday ahaan jireen M/weynayaasha Amxaarada iyo Tigreega? Muxuuse noqon doonaa waxqabadka M/weynaha hadda la doortay? Wax raja ah malaga qabaa inuu Dr. Mulatu wax ka qabto dhibaatada lagu hayo beeralayda Oromada ama xuquuqda aadnaha ee lagu hayo Amxaarada iyo Ogadenya?